လုပ်စားကွက်ထွင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Facebook » လုပ်စားကွက်ထွင်
Posted by ကို ငြိမ်းမောင် on Jul 16, 2013 in Facebook, Politics, Issues |4comments
သတင်းတစ်ခု Mizzima မှာဖတ်လိုက်ရတယ် အဲဒါက စေတနာအရဆောက်ပေးတယ်မထင်ဘူးဗျ၊ ဒေသအစိုးရ တော့ လုပ်စားကွက်ထွင်တယ်ထင်တာဘဲဗျာ။ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ သတင်းလေးက ဒီလိုပါ။
“အစိုးရက ကွန်ဒိုဆောက်ပေးမည်ကို မိတ္ထီလာဒုက္ခသည်အချို့ မလိုလား
ခိုင်ခိုင် | အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၀၈ နာရီ ၃၄ မိနစ်
အမြင်မတူသော လုပ်အုပ်စုများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့သွားခဲ့ရသည့် မိတ္ထီလာမြို့မှဒေသခံများကို မန္တလေးတိုင်းအစိုးရက ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများ ဆောက်ပေးရန် စီစဉ်နေသော်လည်း အဆိုပါ ဒေသခံအချို့က ကွန်ဒိုများကို မလိုချင်ကြောင်း မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သော မတ်လနှောင်းပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခတွင် မိတ္ထီလာမြို့ပေါ်တွင် လူအုပ်စုနှစ်စုက တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အပြန်အလှန် နေအိမ်များကိုမီးရှို့ကြသဖြင့် အိမ်အလုံးပေါင်း ၁၂၀ဝ ကျော် မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ထိုမီးသင့်ခဲ့သော ရပ်ကွက်များတွင် တိုင်းအစိုးရက ကွန်ဒိုဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု မိတ္ထီလာမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက မဇ္ဈိမကို အတည်ပြုပြောကြားထားသည်။
ကွန်ဒိုဆောက်မည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်သည့် ဒေသခံ ၆၀ဝ ကျော်ရှိပြီး ကန့်ကွက်သူများမှာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး ယခုလ ၂ ရက်က ကန့်ကွက်စာကို သမ္မတရုံးသို့ ပေးပို့ထားသည်ဟု ဒုက္ခသည်များကိုထောက်ပံ့ပေးနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက ဆိုသည်။
“ကျွန်မတို့က မွေးမြူရေးလုပ်တယ်။ ဆိတ်တွေ၊ မြင်းတွေမွေးတော့ အခုလို တိုက်ခန်းတွေဆောက်ပေးမယ်ဆို လုံးလုံး အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ မွေးထားတာတွေ ဘယ်နေရာ သွားထားမလဲ။ စိတ်မချတော့ဘူး” ဟု ယခင်က မိတ္ထီလာမြို့၊ ချမ်းအေးရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်ခဲ့သူ မဖြူက ပြောသည်။
ကွန်ဒိုဆောက်ပေးမည်ကို ကန့်ကွက်သူ အများစုသည် မွေးမြူရေးလုပ်ကြသဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဖြင့် နေထိုင်ရန် အဆင်မပြေကြောင်း ပြောကြသည်။
မိတ္ထီလာမြို့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း တစ်ခုမှ ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်လွင်က “အတော်များများက မူလမြေနေရာမှာ အိမ်ပြန်ဆောက်ရရင် ကျေနပ်တယ်ပြောကြတယ်။ အာဏာပိုင်တွေ ဘက်ကတော့ ဒေသခံတွေဘက်က သဘောမတူဘူးဆိုလည်း တိုက်တွေ ဆက်ဆောက်မယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒုက္ခသည်စခန်းများကို မဇ္ဈိမကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ၎င်းတို့ကမူ ကွန်ဒိုဆောက်ပေးမည့်ကိစ္စကို အများစုက သဘောတူကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဒေသခံဦးအောင်မြင့်က သုံးထပ်တိုက် ခြောက်ခန်းတွဲများကို ဆောက်လုပ်ပေးမည်ဟု အစိုးရက စီစဉ်ထားသည်ဟု အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များကပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မိတ္ထီလာမြို့ခံ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုထိန်မင်းခိုင်က “ဆင်ခြေဖုံးဘက်က လူတွေအတွက်တော့ မွေးမြူရေးကြောင့်ခက်နိုင်ပေမယ့် မြို့ထဲက လူတွေအတွက်တော့ ကောင်းမှာ။ နောင်အနှစ် ၁၀ နှစ်၊နှစ်၂၀ အတွက် ကြိုတင် ဖွံ့ဖြိုးသွားစေနိုင်မယ်” ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
လက်ရှိတွင် မိတ္ထီလာမြို့တွင် အခြေအနေ တည်ငြိမ်သွားပြီဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၁၀ ရက်က ညမထွက်ရအမိန့်ကို မနက် ၄ နာရီအထိ လျော့ပေါ့ပေးထားသည်။ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ချိန်တွင် နေအိမ် မဆုံးရှုံးခဲ့သူများမှာမူ ၎င်းတို့၏ အိမ်များတွင်ပြန်လည် နေထိုင်နေကြပြီဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
မိတ္ထီလာတွင် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် လူဦးရေသုံးသောင်းခန့် အိုးအိမ်မဲ့ခဲ့ရပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့ကို ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း အဆိုပါ အရေးကို ကူညီနေသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ စာရင်းဇယားများတွင် တွေ့ရသည်။
အမြန်ဆုံး အေးချမ်း ပါစေ လို့ 
Even with the intention of making people living better, the agreement and actual requiremnets of relevant residents should be the primary factor for any such projects. A Condo project would be great for those who lives and do business in downtown but it will not beagood project for those who lives at outskirts and doing other business such as farming, livestock breeding etc.
သတင်းထောက်ကိုငြိမ်းမောင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်လေးပါ ထည့်ပေးရင် ကောင်းမယ်။
ပုံပြင်တွေ အသစ် ပြန်ရှာချည်ကွာ။